घर को संचालन मा ड्रेनेज सिस्टम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको मुख्य कार्य - सङ्कलन र सही ठाउँमा तलछट प्रवाह को छुट्टी गर्न। उचित उपकरण नालियों नींव निर्माण, मद्दत गर्छ को मोहरा पर्खालहरु को विनाश रोक्न। साथै, नाली घरमा सजावट एक तत्व बुझाउँछ। एकत्र rainwater विभिन्न घरेलू आवश्यकता, सिंचाई लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जल को प्रकार
त्यहाँ हाइड्रोलिक, दुई मुख्य प्रकार जो हटाइएको र rainwater thawed छ हो:
तिनीहरूले मानक ठोस छत र नरम रूपमा स्थापित छन्।
यो व्यवस्था संग, ढल प्रणाली सबै सञ्चालन तत्व भवन भित्र अवस्थित छ। नाली पाइप यस प्रकारको स्थिर गर्न अनुमति छैन र केवल लागि प्रयोग गरिन्छ समतल छतहरुको। यो एकदम बाहिरी सुधार जो मोहरा, देख्न छैन कि मा बाहिर बाट यो फरक छ। नाली देखि बर्बाद भएको जल वा यार्ड प्रदान ठाउँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
को कलेक्टर गर्न कूदनेवाला प्राप्त;
विशेष connectors, जो सिस्टम सफा गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सबै भन्दा लोकप्रिय जल प्रणाली निर्माण को मोहरा मा माउन्ट छ। यो देश र निजी घरमा को सबै भन्दा बाह्य नाली संग सुसज्जित छ। यो प्रविधिको मुख्य सुविधा भएको जल यन्त्र भित्री खत्म सम्म सेट गर्दा, निर्माण पूरा भएपछि बाहिर गर्न सकिन्छ भन्ने छ।
Rainwater घर को कुना मा स्थित छ, तिनीहरूलाई प्रत्येक केवल एक आउटलेट प्रवाह प्रदान गर्न जडान पाइप, अलग प्रदर्शन वा जल गर्न सकिन्छ।
व्यवस्था बाहिरी ड्रेनेज सिस्टम धेरै लाभ छ:
स्थापना निर्माण को विशेष ज्ञान आवश्यक छैन, एकदम सरल छ।
सञ्चालन प्रणालीमा व्यावहारिक कुनै मर्मत आवश्यक छ।
जब संरचना assembling पेशेवर उपकरण आवश्यकता छैन।
आधुनिक भवनहरु बाहिरी rainwater प्लास्टिक र धातु को गर्न सकिन्छ:
कार्बन (कालो इस्पात);
प्लास्टिक र टी। डी।
सबै भन्दा साधारण र किफायती पारंपरिक स्टील को बाहिर सकिन छ। जस्ता वा यसको पलिमर (जस्तै सामाग्री धेरै आकर्षक देखिन्छ रंग मा निर्मित देखि) संग लेपित जंग रोक्न।
जल उपकरण पूरा गर्न किन आवश्यक छ
यो घर जग को निष्ठा जोगाउनुहुन्छ। छत बाट बाहिरी नाली व्यवस्थित भने बर्बाद पानी यसलाई नष्ट गर्न र टाढा धुन छैन।
असिना वा भारी हिमपात ड्रेनेज सिस्टम समयमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। छत मा जम्मा हिउँ उचाइ देखि फल्स को मामला मा ठूलो clumps मा संकलित छ चोट हुन सक्छ।
ड्रेनेज सिस्टम को मद्दत हाइड्रोलिक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सही ठाउँमा पठाइयो र प्राप्त घरमा अगाडि puddles छुटकारा।
यी सबै गुणहरू बाहिरी डिजाइन पर्याप्त मांग मात्र छैन विनिर्माण तर पनि निजी निर्माण छ बनाउन।
आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता आधारमा, तपाईं पाइप को खण्ड चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अपवाह आयताकार, गोलो र वर्ग हुन सक्छ।
नाली बाहिरी निम्न तत्त्वहरू हुन्छन्:
तेर्सो Gutters, छत देखि भोकमरी चिस्यान लिएर।
ठाडो नाली पाइप छत बाट पानी सकिन गर्न।
Funnels, बेकारी पानी प्राप्त र नाली मा उनलाई निर्वहन लागि आवश्यक छ।
को troughs को अन्त्य मा स्थापित छन् प्लग।
(पाइप लागि धारकहरुको लागि troughs र कोष्ठक) भागहरु बन्धन।
को ड्रेनेज सिस्टम को दक्षता को Gutters को आकार मा धेरै हदसम्म निर्भर छ। तत्व को क्रस-खण्ड छ:
मानक तत्व देखि ठेस, को नाली सिस्टम समावेश हुन सक्छ:
Livnepriemniki, पुनः निर्देशित पानी drainpipe मा प्राप्त आँधी नाली।
आवेषण मेष। तिनीहरूले नाली पाइप clog गर्न सक्ने मलबे पकड कूदनेवाला मा राखिनेछ।
ड्रिप, छत किनारा बाट राम्रो थाक प्रदान गर्दछ।
बाहिरी नाली को स्थापना
नाली उपकरण दुई चरणमा समावेश:
कुनै पनि जल उपकरण परियोजना विकास साथ सुरु हुन्छ। आधार मा यो बजेट र कार्य योजना निर्माण गर्न जारी हुनेछ नियम, रूपमा। यो परियोजना व्यास र पाइप को क्रस-खण्ड, आफ्नो स्थान, स्वागत funnels र जल पुस्तिका को संख्या को गणना गर्नुपर्छ। जब आवश्यकता छत क्षेत्र र छत को कोण विचार गर्न। विशेषज्ञहरु छुट्टी पाइप र प्रत्येक कुनामा टुकी स्थापना गर्न सल्लाह।
लागि बाह्य जल को स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ:
पानी जल प्रणाली।
फास्टनरों (हुक, कोष्ठक, gaskets, आदि)।
Puncher shurupuvert, एक हथौडा, एक देखे।
स्थापना निर्देश। सबै निर्माता यसलाई किनभने कडाई सबै सिफारिसहरू पालन गर्नुपर्छ, फरक छ।
सबै को पहिलो, तपाईं घर को कोण मापन गर्न आवश्यक छ। स्थापना नाली नाली तिनीहरूलाई को उच्चतम सुरु गर्न आवश्यक छ। माउन्ट कोष्ठ पनि eaves मा पंच र पेचकस को मद्दतले। अर्को माउन्ट 50-60 सेन्टीमिटरको दूरी छ। खातामा रूपमा प्रति m / N5मिमी रूपमा उच्च हुनुपर्छ जो नाली को झुकाव, को कोण लिन निश्चित हुनुहोस्।
सिस्टम जमीनमा वा छत मा भेला गर्न सकिन्छ, तर पहिलो विकल्प थप सुविधाजनक छ। धेरै कम्पनीहरु तुरुन्तै किनभने आफ्नो कनेक्शन को, लुकेका ताले वस्तु कुनै पनि अतिरिक्त बढते आवश्यक छैन। तपाईं के गर्न आवश्यक मात्र कुरा - ध्यान चिन्ह हरेक सिउनी सीलेंट सम्झना छ। त्यसपछि तपाईं ट्यूब टिप्न र हुक सेट गर्न आवश्यक छ। परियोजना मा निर्दिष्ट ठाउँमा, नाली वा यार्ड मा गर्न आउटडोर नाली पाइप नाली लिइएको हो जो देखि rainwater टाउको लागि छेद, गरे।
पानी प्रवाह कहाँ मोड्नु गर्न?
घर एक पहाडी मा स्थित छ भने, जमीन मा Gutters अन्तर्गत ठोस troughs राखे गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई पानी तल सकिन हुनेछ। वरपरको भूमि वा भवनहरु प्राकृतिक जल नालियों लागि अनुमति छैन भने निर्माण नाली प्वाल। साइट एक राम्रो वा राम्रो, आफ्नो वरपर मा एक प्वाल छ भने। सामान्यतया, यो नाली प्वालहरू को आकार 1-2 मीटर छ। एक पक्ष यो उपखाडी पाइप खोल्ने गर्न छोडेर गर्दा recess को पर्खाल गर्न, crumble होइन, आफ्नो भित्र obkladyvayut इँटा। पिट डूब मा आ बिस्तारै भुइँमा जानेछ। जबकि माटो चिसो को एक गहिराई तल पूर्वाग्रह एक खाडल मा राखिएको पाइप को नाली प्वाल गर्न प्रमुख। ढाक्नु यो माथिको कम पाइप वा जमीन को गहिराई आवश्यक छ भने।
Gable छत: गणना, सुविधाहरू, र डिजाइन रेखाचित्र
नालीदार छत को उपकरण
को टेल्फर कसरी छनौट गर्ने?
Endopterygota: उदाहरणहरू तालिका
शुरुआती लागि stretching लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यास
विस्तार माटो: घनत्व, वजन, गुण र आवेदन
ठाडो र तेर्सो झुर्रियाँ को मूल्य: के मा निधारमा को झुर्रियाँ के
छाला सही कसरी सेतो गर्न?
एक बच्चा मा डायपर दाना: रोकथाम र उपचार
एक वर्णन, सम्भव कारण र उपचार: बिरालो को घाँटी मा Sores
कोट हतियार पेस्कोभ को: इतिहास र विवरण